Kylian Mbappé oo ka fiican Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi kaddib markii uu caawa boqolka xiray!! – Gool FM
Kylian Mbappé oo ka fiican Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi kaddib markii uu caawa boqolka xiray!!
Haaruun June 11, 2019
(Paris) 11 Juunyo 2019. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta PSG iyo xulka qaranka Faransiiska ee Kylian Mbappé ayaa ka fiican Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo ah weeraryahannada Adduunka ugu wanaagsan wakhtigan.
Kylian Mbappé ayaa caawa dhaliyey goolkiisii 100-aad ee xirfaddiisa ciyaareed waxaana uu ka dhaliyey kulanka xulkiisa Faransiisku 4-0 uga adkaaday Andorra ee isreeb-reebka heerka guruubyada koobka qarammada Yurub.
Goolkii furitaanka ee uu caawa dhaliyey Kylian Mbappé kulankan Andorra waxa uu ahaa goolkiisii 13-aad ee uu u dhaliyo xulkiisa France, sidoo kale waxa uu kooxdiisa PSG u dhaliyey 60 gool, halka kooxdiisii hore ee Monaco uu u saxiixay 27 gool, taasoo ka dhigan inuu wadar ahaan 100 gool dhaliyey xirfaddiisa ciyaareed.
Haddaba marka la eeg Kylian Mbappé da’da uu ku dhaliyey 100 gool xirfaddiisa ciyaareed waxa uu ka fiican yahay Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi, isagoo goolashaas boqolka ah ku gaaray da’da 20-ka sano, halka Messi iyo CR7 ay ku dhaliyeen min 100 gool da’da 22-sano.
Xiddiga reer France ee Kylian Mbappé ayaa 100-ka gool ee xirfaddiisa ciyaareed ah waxa uu ku dhaliyey 20 sanadood iyo 173 maalmood.
Kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo haatanna ka tirsan kooxda Juventus ayaa 100 gool waxa ay ku qaadatay inuu dhaliyo xirfaddiisa ciyaareed da’da 22-sanadood iyo 356 maalmood.
Kabtanka kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argentina ee Lionel Messi ayaa isna 100 gool oo xirfaddiisa ciyaareed ah ku gaaray da’da 22-sanadood iyo 97 maalmood, taasoo ka dhigan in CR7 iyo Leo Messi uu ka fiican yahay Kylian Mbappé.
Xulka qaranka gabdhaha USA oo 13 gool ku garaacay dhiggooda Thailand kulan ka tirsan Koobka Adduunka ee Dumarka… + SAWIRRO
Lukaku oo ka hadlay mustaqbalkiisa Man United & wararka lala xiriirinayo kooxda Inter Milan